LAHATSARY: Tobim-pamokarana Herinaratra Okrainiana kilan’ny Afo, Tsy Azo Antoka Ny Hoavin’ny Tanàna Manodidina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2013 23:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, فارسی, polski, Aymara, Français, 日本語, English
Roambinifolo ora taty aoriana, mbola nandravarava foana ny lelafo, simba ny efatra tamin’ireo vondrom-pihary herinaratra, mponina 12.000 no tsy afaka mahazo famanàna, rano mafàna sy herinaratra. Nafindra toerana any amin’ny tanàna iray eo akaiky, Debaltsevo, ireo mararin’ny hopitaly tao an-toerana, hoy ny voalazan’i pauluskp, mpampiasa LJ monina ao Donetsk (Pavel Kolesnik, amin’ny teny rosiana), izay namoaka indray io vaovao amin’ny lahatsary sy sary io ary nandefa izany tamin’ny bilaoginy.
Kolesnik/pauluskp no namoaka ity lahatsarin’ny dimy minitra voalohan’ny fahamaizana ity, noraketin’ny mpiasan’ilay ozinina, sary tamin’ny fotoana «izay mbola tsy dia niredaredàn’ny lelafo loatra » :
Taty aoriana kely, somary niova ny tabilao :
Ary toy izao no endrik’ilay fahamaizana avy any amin’ny tanana 40 km miala an’ilay ozinina (lahatsary an’i Anton Zabolotny, mpampiasa YouTube, naverina navoakan’i Kolesnik/pauluskp):
Kely ny finoana amin’ny hahatafatsangana indray ny toby. [Ny faritra Donbass] dia ho toy ny tanana haolo miala aina fanampiny indray koa […].
Niharan-javatra nitovy tamin’izao ny tananan’Ukrainsk. Na ny [fitrandrahana arintany izay niankinan’ny toekaren’ny tanàna], na ny tanàna ihany koa dia samy tsy tafarina tamin’ny [loza nahatsiravina ny 2002] tao amin’ny toeram-pitrandrahana arintany. […]
Kolesnik/pauluskp dia manome rohy mankany amin’ny sary-fanadihadiany mikasika an’i Ukrainsk, avy eo noraisina sy nadika ho amin’ny teny anglisy tao amin’ny bilaogin’i English Russia.